Teny filamatra 25 nanisy marika a mialoha sy aorian'ny | Famoronana an-tserasera
Ny teny filamatra momba ny vokatra na orinasa iray dia mety hampiakatra ny fampielezan-kevitra amin'ny fanaovana dokam-barotra na hahatonga azy ho antonony. Singa fototra izy io, andian-teny izay mahatafiditra ny iray manontolo fototry ny vokatra sy ny orinasa ary ny filozofia izay manodidina azy. Ny tena asany dia misarika ny saina ary manangana fikambanana ideolojika. Ity faharoa ity dia manan-danja mitovy amin'ny voalohany, satria tsy maintsy tadidintsika fa ny toetra na zavatra tadiavin'ny mpanjifantsika amin'ny vokatra matetika dia tsy ara-materialy. Indraindray dia olana ara-tsaina, ara-panahy na ara-tsosialy io. Ny fampifandraisan'izy ireo ireo soatoavina na hevitra amin'ny marika ireo dia tena tianay.
Ho fanampin'izany, ny teny filamatra dia misy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny fizotrany, satria noho io dia betsaka izy io mora kokoa ho an'ny mpampiasa ny mahatadidy ny marika, miaraka amina hira na andianteny mahasarika dia nahavita ampahany betsaka tamin'ny asa izahay. Izy io dia singa mandresy lahatra fotsiny, izay amin'ny farany tsy mitady valiny na valiny. Ny tadiaviny dia ny firaketana an-tsoratra ny fahatsiarovan'ny besinimaro, ka ny tsotra sy ny fohy kokoa dia, tsara kokoa.
Ireto ny sasany amin'ireo teny filamatra malaza indrindra izay nisy fiatraikany lehibe indrindra:
Coca-Cola: fahasambarana tsy hita maso.
Nike: Ataovy fotsiny.
Vodafone: Hery ho anao (hery ho anao).
Burger King: Ataovy araka ny fanao (Araka ny itiavanao azy).
Mcdonalds: tiako io. (Tiako).
Viceroy: Tsy izay ananako no izy fa izaho.
Mac: Hafa ihany ny eritreritrao.
Movistar: zaraina, bebe kokoa ny fiainana.
L'Oreal: Satria mendrika izany ianao.
Nokia: Mampifandray olona.
BMW: Te-hitondra fiara ve ianao?
Colon: Miantsena manodidina, mampitaha ary raha mahita zavatra tsara kokoa ianao dia vidio!
IKEA: Tongasoa eto amin'ny repoblika tsy miankina amin'ny tranonao.
Kit Kat: miala sasatra kely, manaova Kit Kat.
Heineken: Mieritrereta maitso.
Wipp: hifarana ny fikosehana.
Mastercard: Misy zavatra tsy vidian'ny vola. Ho an'ny zavatra hafa rehetra, Mastercard.
Ny nougat amandy: modia rehefa Krismasy.
Duracell: Ary maharitra izy ireo, ary izy ireo maharitra ary izy ireo dia maharitra ...
BMW: Rano, namako.
Ecovidrio: Na manamboatra ianao, na manangona.
Orlando: Zazalahy, ity ny voatabia.
Adidas: Tsy azo atao ny tsy azo atao
Fiarovana amin'ny arabe: Raha misotro ianao dia aza mitondra fiara.
Manambola: Mandany vola, fa ny tsara indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Teny filamatra 25 nanamarika a aloha sy aoriana
marco gomez dia hoy izy:
TSY MISY SLOGANS POOL CHOCOLATE!
Mamaly an'i marco gomez